Brushed Nickel Gooseneck Kicheni Faucet
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Gooseneck Kicheni Faucet Ine Dhonza Out Sprayer
WOWOW Gooseneck Kicheni fekete Ne Dhonza Out Sprayer
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 41 kasitoma ratings
(41 kasitoma wongororo)
Gooseneck kicheni faucet yeWOWOW ine sarudzo dzakasiyana-siyana. Zvigadzirwa zvepamusoro-zvemhando yekushanda kwakanyanya. 5-gore waranti. Tenga yedu gooseneck kicheni faucet ikozvino!
2311701 mirairo yekuisa
Gooseneck Kicheni Faucet 2311701
Yako kicheni kudada kwako uye iwe unoda iyo yakasarudzika yemusanganiswa wekugadzira uye kushanda kwayo. Mazuva ano iwe unogona kusarudza kubva kune dzakawanda dhizaini yekuita yekurota kwako kicheni kicheni. Zvingave zvichinetsa kuita sarudzo kubva pane dzese sarudzo dziri paruoko rwako. Kwete chete kuti zvishandiso zvese zvekicheni zvinouya mumhando dzese dzemaumbirwo uye hukuru, asi iwewo haufanirwe kurerutsa maitiro ezvisarudzo zvakasiyana-siyana zvefeitiki yekicheni. Kicheni faucets ndiyo yakasikwa inotarisa nzvimbo mune chero kicheni. Kunze kwezvo, faikits yekicheni ndeimwe yemashandisirwo anoshandiswa mukicheni yako. Sezvo iwe paunoshandisa sipo yako yekukicheni kugadzirira chikafu chako, kushambidza ndiro dzako, uye kushambidza kubva pamaoko ako, iwe unoshandisa ichi chinhu chekicheni kakawanda pazuva. Saka iwe zvirinani kushandisa imwezve nguva yekusarudzira yakakodzera kicheni faucet kwauri.
Pombi dzeKicheni dzinouya nenzira dzakasiyana uye mashandiro ekupa akasiyana siyana kuti akwane ese marudzi ezvinoda. Kunze kwezvo, mapombi ekicheni anouya nemhando dzakasiyana, saizi, uye mhando. Mhando huru dzemapombi ekicheni ndeyekudhonza-pasi mapombi ekicheni, kuburitsa mapombi ekicheni, uye mapombi epamusoro-eakisi. Aya mapombi epamusoro-eakisi yekicheni anonzi zvakare gooseneck kicheni mapombi. Mukana mukuru we gooseneck kicheni mapombi ndeyekuti ivo vanopa yakawanda nzvimbo yekushandira mune chero kicheni. Yakareba gooseneck kicheni mapombi inokupa iwe mukana wakakwana kune yako kicheni singi. Nenzira iyi, iwe unenge usina kana matambudziko ekuisa zvinhu zvakakura, kunge hari hombe kana pani, mukicheni yako yekunyura, uye pasi peako epamusoro-arc gooseneck kicheni pombi.
Elegoned yakagadzirirwa gooseneck kicheni faucet
Vagadziri veWOWOW vakatsaurira zvese zvavanoedza kuita kukupa yakanakisa gooseneck kicheni pombi iyo inopa zvakakwana mashandiro futi. Nekuda kwekugadzirwa kwayo kwakanaka, WOWOW's gooseneck kicheni pombi inokubatsira iwe kupedzisa kicheni yako. Iyi yakakwira-arc kicheni pombi inonyatso kupa kusimudzira kune chero dhizaini dhizaini. Pamusoro pazvose, zvakare inoratidzira mashandiro makuru neyakaganhurirwa yekudhonza-pasi sprayer.
Iyi brunch nickel gooseneck kicheni faucet, inozivikanwawo senge-mutsipa kicheni kicheni faucet, inopa kutarisa kwemaindasitiri nezvinhu zvazvino uye zvisina nguva. WOWOW's gooseneck kicheni kicheni faucet yaisazove isipo munzvimbo mune chero magadzirirwo emagazini ine ane akasarudzika makicheni kicheni. Kwete pasina chinhu, iyi gooseneck kicheni faucet ndeimwe yepamusoro yekicheni faikisi yeWOWOW uye kudada kwemutengesi wepakicheni wepakitchen uyu.
Mazhinji-anoshanda gooseneck kicheni faucet
Kunze kwekugadzira, iyi gooseneck kicheni faucet yeWOWOW ndeyakawanda-inoshanda faucet inopa maviri ekupfira sarudzo. Kwete chete kuti iyi yakakwirira-arc kicheni kicheni faucet inopa yakajairwa rwizi kuitira kuti uzadze mapoto uye mapani semuenzaniso. Mukuwedzera, iyo inoratidzira yakagadzikana yekupuruzira mode yekupukuta nyore kushambidza ndiro dzako uye kicheni kunyura kuti ipe yepamusoro yekuchenesa nzira. Iwe unogona nyore kuchinja pakati pezvisarudzo zviviri nebhatani pane faucet nozzle. Izvo zvinoita kuti zviitike kuti uchinje sarudzo neruoko rumwe chete iwe uchinge uchinge uchinge uchingurura. Kuchinja mabasa hakuzokonzerese kupatsanura uye kusimuka kwemaitiro ekuchinja kabhatani kunokatyamadza iwe!
Iyi gooseneck kicheni faucet inouya ne60-inch dhizaini dhizaini-inopa inobvisa-nyore, nekuda kweiyo silicon gel nozzle ye faucet. Neiyi hose, iwe unogona kusvika nyore nyore kunzvimbo dzese dzakaoma dzakakomberedza kicheni yako kunyura. Uye pamusoro pezvose, iyo inoshanduka swivel adapta inogonesa iwe kuti uite pivot nyore kupa yakanyanya nyaradzo. Iyo nyore-inodzoreredza maitiro eiyi gooseneck kicheni faucet ichagara ichitungamidza faucet nozzle kudzokera kune yayo yekutanga mamiriro kana iwe wapedza kuchenesa. Pasina chero dambudziko!
Gooseneck kicheni faucet nemhando yepamusoro
Iyo gooseneck kicheni pombi inokupa iwe mhando uye unoona kuti pane ese mativi eiyi nyowani yepamusoro-arc kicheni pombi. Iyi gooseneck kicheni pombi inorema kupfuura 70 oz, saka iwe unobva waona kuti une yakasimba simbi chigadzirwa paruoko. WOWOW's brass-cored gooseneck pombi ine yakanakisa nickel kupedzisa, uye majoini ese akaiswa chisimbiso chakasimba nezvinhu zvemhando yepamusoro. Izvi zvinokupa iwe unovimbiswa kudonhedza-isina uye kuvuza-isina faucet ruzivo. Kunze kwemhando, ichi gooseneck kicheni pombi yeWOWOW iri nyore-kuisa zvakare. WOWOW's yepamusoro-arc kicheni pombi inongoda 1, 2 kana 3-gomba setup kicheni uye, inotonhora uye inodziya mapaipi emvura. Iyo inosanganisirwa simbi escutcheon yeese maviri, maviri, kana matatu-maburi ekicheni-setups, inoita iyi gooseneck kicheni pombi inowirirana nechero mhando yekicheni setup. Inoenderana nemhando dzakasiyana dzemasink uye iwe haufanire kunetsekana nekubhadhara zvakashata maburi kana maburi. WOWOW inokupa iwe yakazara seti yekuisa zvikamu.
Nenzira ine mutengo gooseneck kicheni faucet
Sezvo mhando yeWOWOW's gooseneck kicheni faucet isinga tsanangurwe, mutengo wemhando yeiyi yakakwira arc kicheni faucet ndiyo yakanakisa iwe yauchawana mumusika. Nekuti WOWOW inoshandisa chete hunyanzvi hwekugadzira michina ine yakanyanya-otomatiki maitiro, tinogona kupa iyi gooseneck kicheni faucet pamutengo unodhura. Fekitori yekicheni kazhinji kazhinji ndiyo yekupedzisira chinhu chinotengwa mukicheni ichangogadzirwa. Naizvozvo mapepa emukicheni kazhinji ndiwo kupinda kwekuvhara kwebhajeti rese rekicheni, uko muganho weiyi bhajeti unowanzo kusangana kana kusvikwa. Naizvozvo zvakanaka kuziva kuti iwe uchiri kugona kuwana yepamusoro mhando yekicheni faucet pane mashoma bhajeti.
Yedu gooseneck kicheni faucet inotumirwa kwauri pasina muripo, kuitira kuti usazotarisana nemimwe miripo yekuwedzera. Izvo zvaunoona ndizvo iwe zvaunowana, uye izvo zvinoshanda nemutengo wedu zvakare. KuWOWOW isu tine hanya nevatengi vedu uye tinoda kukupa iwe mukana wekuve wepamusoro-notch kicheni dhizaini pamutengo wakaderera.
A gooseneck kicheni feki yatinovimba nayo!
WOWOW inotenda mune zvigadzirwa zvayo uye saka hatityi kukupa iwe yegore-mashanu warandi nguva. Kunze kwekunge isu tinokupa iwe yepamusoro chikamu chevatengi sevhisi. Isu tinogara tichiwanikwa kuti tikutsigire, kunyangwe pakuisa gooseneck kicheni pombi. Kwete zvechinhu iwe unovimbiswa futi neyedu-yemazuva makumi mapfumbamwe ekuremekedza kudzoka-mutemo. Kana iwe usingade chigadzirwa nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, isu tinokudzosera iwe pasina chero mibvunzo yakabvunzwa. Sezvauri kuona, paWOWOW isu tinovimba zvigadzirwa zvedu!
Izvo zvakanakira gooseneck kicheni kicheni faucet mune zvishoma:
· Yakasarudzika dhizaini
· Yakabatanidzwa kukoira-kunze kwozzle
· Maviri kupurinda mabasa
· Inosanganisa maitiro ane yepamusoro basa
SKU: 2311701 Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Bronze Nickel, Dhonzera pasi, mwaya
Stainless Simbi / Zingi chiwanikwa / Brass
Kicheni / Mukati / Zvekutengesa / Kwekudyira
Kicheni inodzika pombi; 50cm Kupisa & Kutonhora Mvura Hosi; Dhonza pasi sprayer; Deck Plate; Kuisa Zvishongedzo
41 anodzokorora nokuti WOWOW Gooseneck Kicheni fekete Ne Dhonza Out Sprayer
Kunaka kwangu izvi zvakagadzirwa zvakanaka uye dhizaini yakanaka kudaro, yakasimba uye kumanikidza kwemvura kuri nani pane iyo yekare Delta iyo yakatsiva, zvaive zvakangwarira kutenga mhando, asi chidimbu ichi chiri nani kwazvo uye mhando yacho yakatanhamara, ini Ndiri kuzotenga mapombi angu ese kubva kwavari mune remangwana, ndive nemapombi maviri ekugezera kuitira kuti ini ndaifarira iyi Kicheni zvakanyanya, zvinonyatso kurudzira kune chero munhu anotarisa kutsiva zvinhu zvekare nezvinhu izvi, zvakakodzera mari yacho.
Kunyangwe ndaive ndakasuruvara kutaura zvakanaka kune yangu yekutanga MC pombi, iyi chokwadi ndeye runako! Ini ndinoda kuti ivo vanoto gadzira akakosha magurovhosi ekuisa kuti iwe usasvibise iyo chrome
Pane bhajeti izvi zvakakodzera mari! Zvaive ZVIMWE nyore kuisa (kuburitsa yedu yekare kunze yaive imwe nyaya izere). Ini ndichataura iyo hosipaipi inodzoka kuburikidza nehuremu hwakanyanya, hwakasungirirwa pamucheto wepombi iri pasi pekushambidza.
- Yakanaka mvura kumanikidza
- Smooth mashandiro ekubata & hose
- Hose inodzorera zvakanaka uye inodzoka kutanga chinzvimbo
- Iwo hwaro hwakavhara zvakakwana maburi ekutanga eanopisa / anotonhora emvura mafundo
- 3 marongero akapfapfaidza pombi aine bhatani rekumira nekukurumidza
- Inokwanisa kukwana Bhora Rinogona Kugadzira Pot pasi payo nyore kana kuti inogona kuisiya pakaunda uye shandisa pombi kuizadza.
- Hausati wawana imwe zvakadaro.
Yakakodzera mari iyo kana iwe uchitsvaga rakashongedzwa pombi nekupaza bhangi. Zvakanyanya kurudzira iyi!
JUST akaisa pombi iyi mune yedu mushure mekuvaka chikoro. SIMPLE ishoko! Kwaingoda zvishandiso zviviri uye tauro. Ini ndakaisa yakafanana yakagadzirirwa pombi uye ino inotaridzika uye inonzwa kunakidzwa. Akasimba akasimba uye hapana kuvuza
Isu taifanirwa kujairira kune ekuyerera kwemvura mabhatani ekuti dhonza rekubata riwanikwe kuseri kwechibato (takatarisana nepombi kwete kutitarisana). Ndinoiwana, shandisa minwe yako panzvimbo pechigumwe chako kuti uchinje kubva parukova kuenda kupfira. Tichaona kana munhu wese muchivako achave nechokwadi chekuti mubato unodzoserwa mumutsipa pane kuusiya wakarembera.
Ndakaona chinhu chidiki chisina kukodzera nyeredzi ... Bhatani diki rebhuruu uye dzvuku pamubato riri kumashure. (Ona mufananidzo wekutanga pazasi. Faucet kuruboshwe ipombi yekutanga. Faucet kurudyi ndiyo pombi nyowani) Kazhinji tsvuku iri kurudyi uye bhuruu kuruboshwe kwemvura inopisa - inotonhora. Ndakaedza kuvhura bhatani asi ndakaona kuti raive risiri kubuda. Hapana dambudziko, ini ndakangoita chokwadi chekuti pombi dzemvura dzakafananidzwa bhatani uye ini ndicharega vashandi vangu vazive.
Aya ndiwo maonero angu mushure mekuisa uye kushandisa izvi kwezuva rimwe chete.
Ichidhonza izvi kunze kwebhokisi yakanzwa yakasimba, uye yaitaridzika kunge yakanaka. Yakanga yakazara zvakanaka, uye yakanga isina zviratidzo zvekukuvara kwekutakura.
Ini ndakakwanisa kuisa izvi zviri nyore nepara chete, uye Philips screw driver. Iwo iwo mirairo yaive yakajeka zvakakwana, uye ini handina kana dambudziko neiyo chaiyo yekuisa. Dambudziko raigona kungove raive diki raive nemirairo. Iyo mirairo inoratidza kuti iwe unofanirwa kuisa pombi kuburikidza negomba rinokwira musinki (Nesarudzo kusanganisira bezel yemasinki matatu emakomba), wozobva pasi, pfeka washer yepurasitiki, simbi simbi, uye nati hombe. Izvo zvaisingaratidze ndechekuti kune O mhete inoda kuenda pombi yemvura PASATI yaiswa kuburikidza negomba rinokwira kana bezel. Izvi zvaive zvisina kuoma kuti zvionekwe, asi zvinogona kuve zvinovhiringidza zvishoma.
Zvese mune zvese ini ndakakwanisa kubvisa pombi yekare uye nekukanda iyo nyowani mune isingasviki awa.
Ndiri kufara kwazvo nemabatiro anoita pombi iyi. Mubato unonzwa wakatsetseka uye wakasimba kuti ushande uye ini handina kana dambudziko rekugadzirisa kune yangu yandaida tembiricha uye kuyerera chiyero. Mabhatani ekupfapfaidza anoshanda nemazvo. Iyo yekumwaya yekumisikidza ine simba kwazvo, inova yakanaka yekuchenesa. Pombi inonzwa yakasimba uye iyo inodhonza pasi kamwene inoshanda mushe uye inodzoka isina matambudziko. Bhegi iri rinotaridzika zvakanaka zvine mutsindo uye rinowirirana nesingi isina brashi simbi ndakariisa kune zvine mutsindo.
Kumwe kunyunyuta kudiki.
Kugadziridza tembiricha apo mvura iriko inonzwa kungoti netsekei. Izvo hazvina kuoma, asi hazvina kunaka.
Panzvimbo yekupfapfaidza, nemvura ikatenderedzwa nzira yese pairi inogona kunge yakati simbei, uye mwenje mheni / kuputika kunopukunyuka singi.
Bhatani rekusarudza iyo yekumwaya modhi ine bata kwazvo kubata. Ndingadai ndakaifarira kuti itore kungo wedzera kumanikidza kuti uchinje maitiro.
Ini ndinofunga iyi ipombi yakanaka kwazvo, uye inoita kunge inofananidzwa nevamwe inodhura zvakapetwa kana. Yakakodzera mutengo uye inokodzera iyo shanu nyeredzi chiyero.
Wow chigadzirwa chakanaka kwazvo pamutengo. Inofananidzwa nemapombi akafanana paLowe neavo aive akapetwa katatu mutengo. Nyore kuisa yakauya nezvose zvinodiwa. Unogona kurumbidza ichi mhando.
Ndinokutendai mudzimai anofara kwazvo!
NDINODA pombi iyi. Takaenda kubva kune enamel yakavharwa simbi simbi ine nickel pombi yaive yekutanga kuimba yedu yemakore 1950 ndokuitsiva neiyi. Ndaida kungobatwa rimwe chete raiisprayerwo. Inotaridzika kunge yakanaka mune yedu ichiri kufambira mberi kicheni remodel uye inoshanda kwazvo! Hatina kumanikidza kwemvura kukuru, asi izvi zvichine simba rakakura, kunyanya kana iwe uine pane pfapfaidzo pachinzvimbo cherukova. Murume wangu akariisa risina kana dambudziko uye haana kumbozviita kare.
Pombi yekare yekicheni yaibuda mvura, yakatanga yaedza kuisa epoxy yakatenderedza nzvimbo inodonha, haina kukwanisa kugadzirisa dambudziko, yakafunga kutenga pombi nyowani kutsiva pombi irikudonha.
Imba chivakwa chekurendesa, haigone kupa chikonzero chekushandisa madhora mazana maviri kuwana delta / moen, yakatsvaga paowow, pakupedzisira yakafunga kutora iyi imwe base pane ongororo nemutengo.
Yakanditora kwakatenderedza awa kuti ndibvise pombi yekare uye nekuisa iyo nyowani. Iyo faucet pachayo inoita kunge yakagadzirwa zvakanaka, rairo dzaive dzakajeka. Mushure mekuimisa, yakavhura / kudzima pombi, yakashanda sezvanga zvichitarisirwa, hapana kuvuza. Ndinovimba, iyi pombi inogara seizvi kwenguva yakareba. Anofara kwazvo nezvekutenga.
Pandakatenga imba yemakore makumi masere, ndakaziva kuti ndaizofanira kutsiva zvinhu zvishoma, kunyanya pombi yekare yekicheni.
Pombi yekutanga yaive yakaiswa zvisirizvo, saka iyo inotonhora / inopisa mvura mafundo akanzi akanganisa. Yaivewo neyakaipisisa yekumanikidza kwemvura uye chipfapfaidzo chisingachashande Mavhiki mashoma mushure mekufamba, ndakafunga kuti kutsiva pombi ndiko kwaizove chirongwa changu chinotevera.
Ndakatenga pombi iyi nyowani mushure mekutarisa vamwe muzvitoro zvekuvandudza pamba uye kuverenga wongororo. Uyu zvechokwadi haana kuodza moyo.
Pakangobviswa pombi yakare, kuisa iyi yaive mhepo uye yakatora isingasviki hafu yeawa. Ipapo ndakadzorera mvura kumashure kuti ndiyedze uye ndakazvitsamwira ini nekuda kwekusatenga izvi nekukurumidza. Kwete yangu chete mvura yekumanikidza yakadzokera kune yakajairwa, iwo anopisa uye anotonhorera zvinyorwa zvakazopedzisira zvakanyorwa nemazvo uye sprayer mashandiro akadzoreredzwa zvakakwana.
Pakazara, ndinofara kwazvo nekutenga kwangu - ichi ndicho chimwe cheangu "epamusoro-soro" andaifarira kumba kwangu izvozvi!
Yakadzoserwa mubato mumwe wekare, gomba rimwe neiyi. Zvese zvinhu zvinokwana zvakakwana uye zvakashamisika zvinofadza kuti zvakauya nezvakarukwa kupisa uye kutonhora maipi akasungirirwa kumusoro kune yangu akajairwa magetsi vheji yekubatana. Iyo sprayer hose inokurumidza-kubatanidza uye inobvaruka pamwe chete. Ndakanga ndisina zero kubuda pakutanga kutanga. Zvishandiso zvinodiwa: sikuruji mutyairi uye diki wrench yekusimbisa iyo nati pane hoses senge pendi kana crescent wrench. Kuisa kuri nyore kwazvo. Dai ndaiva pombi yemvura ndaitenga gumi nemaviri eaya ndoachengeta mutiraki rangu. Mutengi anobhadhara $ 150 nazvo uye anofara.
Ini ndakatanga kushamiswa nekurongedzwa zvakanaka pombi yakauya uye kunaka kwayo kwaitaridzika. Yakanga yakafanana nechiridzwa chakanaka kana iwe ukavhura bhokisi wobva wariona kekutanga. Isu takaisa iyi mune yedu yekushandisa tub yakura yerudzi rwechipiri yekubata mapombi izvo zvainyanya kuomesa pazasi nekuda kwenzvimbo yakamanikana yekuwana yekuchengetedza pasi mukati - yaifanira kumhanyira kuchitoro chehardware kuti itore chimwe chakasiyana chisina kurova mativi e iyo tabhu. Ndingafunga kuti kambani inosanganisira spin pane yekuchengetedza kana kuita imwe iwanike yakafanana neiya anoshandiswa pamaburi maviri erudzi rwepombi. Taida kuti chinosasa chigeze imbwa uye mamwe mapombi ose ane chipfapfaidzo chinokwana mhando iyi chakagadzirwa zvakachipa chaizvo taifunga kuti tichaedza izvi. Izvi zvakaiswa nezuro mune rimwe remakomba (ayo anokwana zvakakwana netambo dzinoenda kuburikidza naro uye isu tichawana plug yeiyo gomba rasara kana kuiswa mune sipo yekupa). Nguva ichataura sezvo ichishandiswa kuti inosimudza sei asi isu tiri kufara kwazvo nechigadzirwa!
Ndinoda zvese nezve pombi iyi. Yayo haina kudhura zvakanyanya asi yakakosha mari yacho chokwadi! Iyo hosi yacho pachayo inotsvedza kutora mukati nekubuda uye zvakare zvakareba zvakanyanya futi. Saka zvinonzwisisika kusuka chero ndiro uye kusuka iwe kunyura latera futi!
Ndinoda kuchinja pombi yangu yakare yekicheni, ndaifarira dhizaini iyi, WOWOW haina mukurumbira zvakakwana, asi mutengo wakanaka, saka ndakatenga pasina kana kuzeza. Murume wangu akateedzera rairo yekuisa, uye anogona kutopedza pasina mumwe rubatsiro! Inoshanda kwazvo, kuyerera, mubato, kudhonza kunze sprayer, zvese zvakanaka! Chibvumirano chinogutsa kwazvo!
Mhando imwechete yemapombi inotengesa zvakapetwa katatu mutengo pazvivakwa zvekuvandudza pamba. Ini ndanga ndaneta nekuda kweizvi, asi ndinofara nekutenga uku. Iko kumanikidza kwemvura kwakakwana uye iyo yekudhonza inosimudza inoshanda zvakanaka uye inodzokorodza zvakakwana. Handikwanise kutenda mhando yemutengo !!!
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Mushure mekushandisa izvi kwemwedzi yakati wandei ndinofanira kutaura kuti ndiri kufara kwazvo neichi chigadzirwa. Inonzwa yakasimba uye yemhando uye inoshanda mushe. Ini ndaive nezvimwe zvekunetsekana nekuti paive nemawongororo mashoma apo vamwe vaipokana nezvekuti musoro wekusasa wakaita sei (kana hauna) kudzosa nekubata panzvimbo asi ini handina kana dambudziko kurema kunoita basa rakanaka rekuita kuti ridzokere uye rinokodzera kupi inofanira kudaro. Iyi ipombi yakanaka seyese yandakaona inodhura zvakapetwa kaviri uye nekuwedzera.
Inotaridzika inotyisa, inoshanda mushe uye yaive maminitsi mashanu ekuisa. Yakanyatsonaka, yakanaka kutaridzika, mhando zvigadzirwa.
Mimwe wongororo inocherekedza kuti kupisa uye kutonhora mamaki pombi pombi kunoisa inopisa kurudyi kurudyi kwekutenderera kutenderera, uko akawanda mapombi eUS anoisa inopisa kuruboshwe. Izvo chaizvo hazvina basa, mamaki akajeka zvakakwana uye zvinotorwa ese maminetsi gumi neshanu kuti ujairire. Nekudaro kana iwe ukaisa lever kurudyi sezvinoitwa nevazhinji saka kupisa kuri kumashure uye kunotonhora kumberi inova sarudzo yakanaka. Asi kana zvichinyatso kukosha iwe unogona kudzoreredza hooku yemitsetse (asi ipapo iyo diki kodhi kodhi chiratidzo chinenge chisina kunaka. Ini ndinosarudza iyo chiratidzo chingave chakanangana kuitira kuti muenzi asaone mashandiro ainoita…)
Changu chete chandinoramba ndechekuti mutengo unoramba uchidonha uye ini ndabhadhara yakawanda asi hei, iyo mari inosanganisirwa yatove yakanaka kudiki kune rudzi urwu rwefaucet… yaive yakawanda pamutengo wandakabhadhara uye ingangove iri chibvumirano chiri nani kwauri .
Bhegi iri rakashandura singi, rinotaridzika kunge rakakura, zviri nyore kwazvo kuchenesa, zvigunwe zvemunwe zvemahara, zvinoshanda chaizvo, zvakakurudzirwa zvachose!
Ndakave nazvo izvi kwemwedzi yakati wandei zvino uye ndinofanira kutaura, zvakapfuura zvandaitarisira pamutengo wakabhadharwa. Inotaridzika kunge yakanaka uye inoshanda nemazvo. Unofara nekutenga kwangu!
Zviri nyore kwazvo kuisa. Sink wrench haina kudikanwa, ingori yepakati inogadziriswa wrench Phillips musoro screwdriver (yakareba zvakareruka) zvakare plumbers tepi yekubatanidza hosipaipi. Vakatora maminetsi ese makumi maviri kuti vaise kana chekare chabuda. Uku kwaive kutenga kwakanaka uye kunoratidzika kunge kwakanaka!
Takatenga faucet iyi yakawanda kwazvo pasi pompombi yakafanana ingadai iri kuchitoro chikuru chebhokisi. Pombi yakare yainge yatsamwa uye yainetsa kuzadza mapoto emvura. Kuisirwa kwaive nyore uye hakuna kutora nguva yakawanda. Ndingakurudzira iyi pombi kune chero munhu anofunga kuitenga.
Iri ibasa reunyanzvi kumutengi anotora. Iwe hausi kuzonyadziswa mukutenga uku. Ndakaverenga kuburikidza neongororo idzi kutanga. Vhidhiyo ine mukadzi ari kudhonza pairi isina kuiswa iyo inosetsa senge yandawana. Munhu ari pamberi pangu akange akaisa pasi pekambani yekaunda mumaraini ekutanga uye kwete pazasi pesink uye ndakaiwana seizvi. Ini ndaifanira kuibvisa. Vamwe vanhu havana njere dzimwe nguva. Yakaiswa mumaminitsi gumi nemashanu. Iyo inodzokera kumashure sezvazvinofanira kuita nehuremu hwakanamatirwa chaizvo pane tsvuku tag iyo inoti "uremu" uye iwe hausimbise iyo nzira yese kana iwe waizoi kink iyo. Izvi ndezve vanhu vanofarira zvinhu zvakanaka mukicheni yavo, kunyanya isina simbi uye vanoipukuta pasi mushure mekupera kwekushandisa kwese. Ivo vanofarira kuchengetedza girazi kupera pane zvese. Izvi ndezvawe. Nakidzwa.
Iyi ipombi yakanaka kusvika zvino. Iyo hosi inochinja uye inoita kunge yakavakwa zvakanaka. Iyo faucet yaive nyore kuisa uye inotaridzika yakakura neiyo goose mutsipa dhizaini. Takatenga izvi kutsiva yekare yainge yatsemuka uye hatina kuora moyo zvachose. Ndinovimba inogara makore mazhinji. Ndinofara inouya mukutarisa kwesirivheri kwesirivheri kunoenderana neyedu yese mimwe michina.
Pombi iyi yakanaka! Murume wangu akange asina kana dambudziko rekuiisa. Icho chigadzirwa chakanakira mari. Zvinotaridza senge zvinodhura zvakanyanya kupfuura zvazvaiita. Ini ndinokurudzira zvikuru!
Ida pombi iyi. Chinhu chega chandinoshuvira dai chaive nacho kudzima chipfapfaidzo apo pombi inodzima. Iwe unofanirwa kuishandura nemaoko kuti udzokere kune yakajairika rwizi zvikasadaro iyo inogara mu sprayer
Zviri nyore kwazvo kumisikidza yemhando yepamusoro zvakare. Zvakatora maminetsi gumi nemaviri kutora iro raimbova bhegi kubuda ndokutsvedza iri mukati. Bomba iri isimbi inorema. Ndakaenda kuchitoro chikuru chemabhokisi uye ndikaenzanisa. Iyi inofananidzwa mushe nevaya vanodhura katatu kana kana zvakapetwa zvakapetwa. Ndiri kure nehunyanzvi uye zvakadaro ini ndinoisa izvi mukati pasina matambudziko chero. Rombo rakanaka.
Ndakairaira izvi nekakutya nekuti mutengo waive wakanyanya kushoma pane zvimwe zvigadzirwa zvakafanana, asi zvichibva pane wongororo dzandaifunga kuti dzakakodzera njodzi. Ndanga ndave nazvo zvino kweanopfuura mwedzi miviri uye ndinozvida chaizvo! Yakasimba, mabhatani ari nyore kufamba uye ini ndinoda iyo "kumbomira" yekuzadza zvirongo, nezvimwe. Chinhu choga-chisina kunaka chandakawana ndechekuti pombi haina kunyatso shanduka sepombi yekupedzisira yandaive nayo; izvi hazvireve kuti zvakaomarara, asi iwe haugone kuzvikotamisa kuita "u" kana chero chinhu. Ndingakurudzira chinhu ichi zvichibva pane zvandakaona kusvika zvino!
Ini ndakazviisa izvi pachangu mwedzi mishoma yapfuura, uye kusvika parizvino, hatina kana kuvuza, nzvimbo dzine ngura kana chero imwe mhando yekukuvara. Iyo irinoreruka uye inoita kunge yakati simbei pakushanda mubato, asi isu hatina kana matambudziko nazvo. Iyo faucet yakachipa, saka ndinofungidzira izvo zvinoreva yakaderera mhando kupfuura mhando izvo mazana emadhora, asi ichi chakanaka, chakadzikama mhando sarudzo kwatiri. Takatofanira kutenga baseplate kuti tiende nayo, zvinoita sekunge inofanirwa kuverengerwa, asi icho chaisave chinhu chikuru kwatiri. Kutenga kukuru.
Ndanga ndichishandisa izvi kwevhiki. Yakatsiva $ 200.00 Moen faucet yaingova nemakore maviri chete uye yaive nematambudziko akawanda nayo. Iyi yaive nyore kuisa. Yakangonaka seMoen. Chinhu chega chandisingade asi chandingajairire musoro wefaucet une notch mairi kuitira kuti painosveerera ichidzokera muchikamu chikuru chepombi, inofanirwa kuve yakaenzana iyo dzimwe nguva isiri uye zvino iri kubuda kunze zvishoma. Nyore zvakakwana kugadzirisa nekumonyorora zvishoma. Ndiri kuona chikonzero nei vakaita izvi, kuitira kuti kana chave panzvimbo iko kuchinjika pakati pemhando dzerukova rwemvura kwakananga kumashure uko kusingaonekwe. Kutenga kukuru!
Ini ndanga ndichitsvaga kutsiva pombi yedu yekicheni sezvo yekare yakanga yanyatsopfuura makore makumi maviri ekuberekwa. Ini ndakatanga kuenda ndichienzanisa kutenga kune maviri emahombe mabhokisi ekuvandudza dzimba uko kwandakawana yavo "bhajeti inoshamwaridza" mapombi aive akakomberedza madhora makumi mapfumbamwe nemaitiro andaida. Ndakafunga kuona izvo zvibvumirano zvandingawana online.
Faucet iyi inotyisa, uye yakapusa kuisa. Izvo chaizvo zvakanditorera nguva yakawanda kubvisa pombi yekare pane kuisa iyo nyowani. Mitsetse yemvura yaive yakareba zvakakwana, zero zero kumberi uko. Kana zviri zvekushandisa zvekumisikidza, chese chandaida chaive Phillips screwdriver uye 5/8 - yakavhurika-yakapera wrench. Kana ari maturusi anodikanwa ekubvisa pombi yakare, ini ndaifanirwa kuchera vhiri rangu rakacheka-cheka nekuda kwekora pasi pesink raive rakazara.
Kukwana uye kupedzisa kwepombi iyi zvakangofanana nezvandaigona kuwana muzvitoro zvemuno. Zvishandiso zvinoita kunge zvemhando yepamusoro, uye mashandiro acho akanaka. Kune avo vanogona kunge vane nyaya nemusoro usingadzokere kumba mushure mekuadhonza, pane nyore kugadzirisa. Fambisa uremu hwekudzosera kumusoro iyo hosi masendimita mashoma kuti isapindire chero mamwe mabheji. Kurema kwacho kunorema zvakakwana kuita kuti musprayer musoro uri-munzvimbo isina magineti, uye uzviite nemazvo. Ini handizeze kutenga imwe WOWOW pombi kana kuikurudzira kushamwari kana makondirakiti.
Ndakatenga pombi iyi nekuti mukadzi wangu kana mwanasikana wangu akatyora yakachipa yaive mumba mangu pandakaitenga, hapana kana mumwe wavo achabvuma. Singi rakasimba, rese simbi, uye nyore kuisa. Ndine chokwadi kuti chero munhu achachityora chero nguva munguva pfupi. Ini ndaifanirwa kutenga maipi uye maadapter kuti ndisvike uye ndibatanidze kune yangu yemvura mutsara asi inoshanda chaizvo!
Rega ndimbotanga nokutaura kuti iyi ndiyo yakanga iri nyore nyore pombi yekicheni yekuisa. Ndanga ndichiita kuiswa kwepombi kwemakore mazhinji uye ndiri pombi. Pombi inouya nezvose zvinodiwa kuti ive yekumisikidza yakajairwa uye inouya neakawedzera mahosi ekupa mvura. Izvi zvakauya zvinondibatsira nekuti vharaji yemvura inopisa yakaiswa zvakadzikira uye ndakanga ndisina chokwadi chekuti yaizosvika here? asi mushure mekuchengetedza pombi pasink ndakakwanisa kubatanidza hosipaipi yemvura inopisa neinenge inchi yekuchengetedza. Iyo kiti zvakare inouya nemaviri ekupa mavhavha evharuvhu ekuenda kubva ku1 / 2 ″ kusvika pa3 / 8 ″ kubatanidza kungoitira kuti mavhavha aripo aripo haana kumisikidzwa kuti abatanidzwe mune itsva 3/8 ″ hoses yekupa. Iyo yekumisikidza mirairo yaive yakapusa kwazvo kutevera nhanho nhanho. Rimwe rematanho acho raive rekuburitsa kunze kwepombi yekuisa kune iyo tepi yekumwaya musoro usati wabatanidza iyo inokurumidza kubatanidza coupling. Ndakasvetuka nhanho iyi nekuti ini ndanga ndatoburitsa mvura yaivepo inopisa uye inotonhorera mumugomo kuti ndibvise marara ndisati ndatanga kumisikidza pombi nyowani. Pombi iyi inoshanda zvinoshamisa uye yakakosha kwakadai pombi yakanaka yemhando yepamusoro. Ndabhadhara madhora mazana maviri kudepoti yekumba pombi yaifananidzwa neiyi asi yakanyanya kunetsa kuiisa, hunyanzvi hwemhando yepamusoro uye ndakauya nemapombi mapfupi. Ini ndaizoda kubatanidza mapaipi maviri kuti ndisvike pane yakadzika kwazvo inopisa vharuvhu yekupa mvura zvino zvakazouya nepombi yedepoti repamba. Ndiri kufara zvikuru nekutenga kwangu uye ini ndinoronga kuodha imwe pombi ipapo kune imwezve yandinoroja.
Bhegi rinoratidzika kwazvo uye rinoshanda nemazvo. Mirayiridzo yaive yakanaka uye kumisikidza kwaive nyore.
Zvimwe zvinhu zvandakawana:
* Dhonza kunze spout ipurasitiki nepo zororo repombi iri simbi. Izvi zvinoita kunge zvakaenzana mwero pamapombi uye pamwe zvakapihwa panguva ino yemutengo. Iyo yekudhonza kunze hose zvakare haisi yesimbi. Ini ndinongovimba kuti zvikamu izvi zvinomira muyedzo wenguva uye kushandiswa.
* Pane switch ye rocker inodzora spray vs rwizi. Zvinoita kunge zvinogara munzvimbo yekupedzisira yaunosiya. (Mapombi mazhinji andaona anoda kuti mvura ivepo kuchengetedza basa rekupfapfaidza). Bhatani re "kumbomira zvishoma" chinhu chakanaka chekushandisa ruoko rumwe chete wakabata ndiro kana mapani nerumwe ruoko. Spray yakasimba.
* Pane huremu hwekuchengetedza iyo yekuvhomora muromo wepombi munzvimbo. Izvi hazvishandisike kwandiri sezvo ndine mitsara yakawandisa nemapombi uye mavharuvhu akavharika munzira. Ini handikwanise kudhonza iyo spout inopfuura gumi mainji kunze kunze kwekurema kurembedzana nechinhu. Kana yako yepasi-yekunyura nzvimbo yakasangana, ichi chinhu chekufunga. Neraki pombi yangu yaibuda yaive nechitubu chandakakwanisa kushandisa pano.
* Iko kune diki sirivheri ruvara sikuruu iyo inokanganisa iyo gooseneck (inoita kuti iome kana kuve nyore kutenderera). Ini ndinonongedza izvi nekuti kana iwe ukaisa mubato wakatarisana neruboshwe, sikuru iri kumberi nepakati. Kana iwe ukaisa mubato wakatarisana nepakati, iyo sikuru iri kurudyi. Kana iwe ukaisa mubato kurudyi, sikuruwa iri kumashure. Iyo dhizaini inoita kunge yekufungidzira iwe unozoisa neyekubata kurudyi sezvo zita rechiratidzo rinotarisana newe mune ino kesi. Yangu yekutanga dhizaini yaive yekuisa mubato kuruboshwe asi ini handina kukwanisa kubata nekuona sikuru, saka ndakachinja kuti ndive nemubati pakati. Ini ndinofunga kuve nesikuru yakatarisana nemubato raigona kunge iri zano riri nani kuitira kuti mabatiro ese magadzirirwo agone kugarwa pasina sikuru kumberi kumberi (kana kuita kuti sikuruvara nhema). Vamwe vanhu vanogona kunge vasina hanya asi zvinonamira kwandiri.
* Pasuru yacho inosanganisira ndiro yemasinki matatu emakomba asi buri rimwe chete ndiro rinonyatsoshandiswa. Iko kune zvakare maadapter e3 / 1 kusvika 3/8 inch vanobatanidza.
Pakazara, kwete yekufarira kana yepamusoro yetambo pombi kunze uko, asi ini ndinofunga iwe unowana wakanaka kukosha kwemutengo.
Mushure mekuve nemusoro unodhura unodzika musoro wakundikana kwemavhiki mashoma muzvisimbiso zvawo ndakatenga iyi nekufungidzira, ini ndanga ndisingatarisire zvakawanda. Kushamisiko yangu kuvaka kwacho kwakasimba, zvinhu zvakanaka, uye zvakauya neZVESE zvandaida kuzviisa; iyo yakatouya nema hose adapters akagadzirira kuenda. Kunyura kwakasimba kubva pane zvandakaona kusvika parizvino, kuchagadzirisa kana paine chinokanganisika.
Zvinhu zvekurangarira kana uchitenga:
-Hapana sipo yekupa, saka kana iwe uchida kuibatanidza iwe unofanirwa kutsvaga iyo mbiri
-Ndakatenga izvi zvichitengeswa zvakachipa chaizvo, saka ma ups esink aya akanyatsoenderana nemutengo wehunhu
-Good renji yekufambisa yemusoro uye yekubata, saka ita shuwa kuti ichave iri padyo padyo nemadziro ekumashure (Atleast 1 1/2 inch)
Ndanga ndichida pombi yakaita seiyi kwenguva yakareba asi ndanga ndisina mari yakakwana yekutenga. Yako "WOWOW Faucet" yakanyatso kuitirwa mhando uye mari. Ndapota ramba uine stock kune vanhu vakaita seni vari pabhajeti uye ikozvino ndine yakanaka kwazvo mhando pombi yekushandisa kwenguva yakareba kwazvo. Ndatenda uye ndokumbirawo endererai rose rakanaka basa. Ndatenda!
Ndiri newbie kune DIY kicheni pombi kutsiva. Ini ndaifanirwa kutsiva yekare Pfister 526 Contempra pombi iyo inodhonza pasi pombi yakatanga kudonhedza kuseri kwemusoro chaipo. Ini handina kukwanisa kuita pfungwa dzangu kuti ndozogadzirisa here kana kutsiva. Ini ndakanga ndagadzirisa rakasiyana dambudziko pairi kamwe kare. Asi chii chakagadzirwa zvakashata, pamusoro peinjiniya, uye nekudaro chigadzirwa chinodhura icho chaive. Kugadzirisa hakuna kumboita senge yakanaka sarudzo. Kunyange zvikamu zvacho zvaidhura. Iwe unotsiva imwe, imwe ichakusiya iwe (ndizvo zvakapfuura mainjiniya uye dhizaini yakaipa). Tenda Mwari ndazvibvisa. Kutenda kunyengetedza uye kurudziro kubva kushamwari uye mhuri, uye nenguva yakakodzera mheni yakarova paWOWOW, ndakapa iyo WOWOW pfuti. Hazvina kumboitika kutadza nepombi nyowani iyo yaidhura zvakafanana neiyo Pfister inodhonza pasi hoso yega. Izvo zviri nyore, zvine musoro dhizaini, uye kuve nezvose zvishongedzo zvakabatanidzwa mupakeji zvakaita kuti zvinyanye kunakidzwa kuisa. Izvo zvakandipa chitsva chakawanikwa chivimbo mushure mekuita iro basa. Zvakanaka zviripo. Rega ndibvunze, ndezvipi zvimwe zvinoda chero munhu mukompu yekicheni zvachose, apo vese pavanenge vaine zvichemo zvakafanana.
Ndakatenga pombi yemukicheni iyi mushure mekutsvaga kwakawanda ndichitarisa mhando dzakasiyana. Ini ndinoda kuti ine bhatani rinoratidza zvakajeka kupisa uye kutonhora. Mamwe mapombi andakatarisa haana chinhu ichi. Ini ndaive nepombi yekuisa iye ndokuti chakanyanya kuomesa kubvisa pombi yekare. Kuisa iyi yaive nyore nyore maererano naye.
Pombi ine kuyerera kwakanaka nezvose zviri zviviri zvakatwasuka uye zvakafara kuyerera kwemvura. Mubato wakatsetseka chaizvo kushandisa. Ini ndinoda kuti kumusoro kwepombi kunogona kubviswa uye kusvika kune idzo nzvimbo dzakaomarara musinki. Isu tanga tine pombi yekare yechikoro saka ichi chinhu chakanaka kwatiri ikozvino. Zvese mune zvese, yakanaka kwazvo tenga IMHO. Takatenga iyo mubrashi nickel uye zviri nyore kwazvo kuramba yakachena vs chrome iyo yakatsiva.
Panyaya yezvatinoda isu tinofarira sitiraira, iyo yakakwirira arc, uye nyore kusvetuka kubva kudivi kuenda kudivi. Yakanakisa aerated kuyerera uye yakanaka pfapfaidzo. Kana zviri zvekusafarira, chichemo changu chete chingave shinda dzemhando yepamusoro muhutu dzinonamatira pombi padivi. Iyo nati yaizoshandura 3/4 shanduko zviri nyore uye yekupedzisira 1/4 ZVAKANAKA zvakaoma. Yaive yakadaro nzira yose kusvika kudhishi iyo ingori 1/2 ″ gobvu. Hazvinakidze murume mukuru akarara nemusana pasi pesink. Ndiro yeesutcheon yakangovhara maburi matatu musink. Iyo inch yakareba ingadai yakave yekuwedzera. Chisimbiso chiri pakati pebhegi neplate yesututon ndiyo (chinhu chechipiri) chinonzi "gasket". Chaizvoizvo iri O mhete. Gasket rakatsetseka. Vanhu vazhinji vaizoziva O chindori kana vachichiona. Inoita kuti isanyanye kuvhiringidzika sezvo paine rabha gasket (rakadzika) iro rinoenda pasi pesinki pamusoro pesimbi yesimbi. Kubatana kwemvura nekukurumidza uye nyore. Hapana kana kudonha kumwe.
Zvitore! hauzombozvidemba !!!!! Zviri nyore kuisa uye izvo zvinotaurwa mune rondedzero, maminetsi makumi maviri kuti uzviise pamwechete, YUP !!!! zvakanditorera maminetsi makumi maviri. Pombi iri refu, saka ndichakurudzira mutengi kuyera nzvimbo yavo b20 kuitenga. Ndinoda kuti pombi inokwanisika uye inoita kunge inodhura. Ndatenda WOWOW nekuisa pombi pamutengo unonzwisisika !!!!! Kana zviri ikozvino, ini handikwanise kutaura chero chinhu chisina kunaka saka ndinokurudzira iyi pombi saka chienda nayo!
Ini ndiri munhu anonyunyuta saka ndakashopwa zvakanyanya uye ndakaedza nepandinogona napo kuti ndisapiswe. Ndakafunga pane iyi faucet, kunyangwe hazvo zvimwe zvikamu zvangu zvakati "bhadhara iyo yekuwedzera kuti uwane chaiyo REAL". Kugadzikana kunokosha kwandiri - kusvika padanho. Parizvino ndinonzwa sekuti chigadzirwa ichi chakanunurwa zvachose, uye chakanyanyisa kupfuura zvandaitarisira. Mhepo yekuisa (kunyangwe isiri iyo yekutanga), asi zvakanakisa pane zvese zvinoshanda zvakakwana: simba rakazara paunenge uchirida, zvishoma kana usingaide, ida chipfapfaidzo asi zviri nyore kuchinja pakati pekupfira uye kurukova. Murume wangu anga asina chokwadi chekuti aifarira kutaridzika, asi izvozvi zvave mukati anozvida chaizvo. Zvese mune zvese ndiko kuhwina kwakazara (kusvika parizvino). Ndichagadzirisa kana paine chinoshanduka nekushandisa (kusimba), asi mavhiki maviri mukati uye ini ndichiri kuchida.
Kubva panguva yaunovhura pasuru, iyi faucet inoonekwa yemhando yepamusoro. Zviri nyore kuisa uye kushanda zvakanaka. Ndakabvisa pombi yekare yekushandisa yakanga iine payipi yepakati inodonha kunyangwe yaive isiri yekare. Hunhu hweowowow hwakakwirira zvakanyanya. Kuita kuti pombi iyi ishande mutub utility yaive nemaburi matatu, ini ndaida 3 ″ escutcheon (panzvimbo yeiyo hombe iyo yavanosanganisira yekuisa yekicheni). Ndakawana iyo BWE 6 ″ escutcheon iri brushed nickel fit well (akati wandei andakatenga haana kutsvedza pamusoro peWOWOW kunyangwe mamwe ma escutcheon akati dhayamita yavo yaive 6 1/3 ″). Ini ndaishandisa rasp pachibhorani kuita iyo yepakati gomba rakakura zvakakwana kuti igone WOWOW. Saka unofara nezvose zvinhu.
Tiri mubishi rekugadzirisa kicheni yedu uye taida pombi nyowani sezvo yedu yekare yaive ichidonha. Mushure mekuongorora akati wandei mamamodeli akasarudzika pane aya.
Mutengo wacho waive wakakwana (isu tairenda saka tanga tisingade kushandisa yakawanda) singi redu rakaburitswa apo isu tichidzosera pakaunda misoro yedu saka zvaive zvishoma kumanikidza kuiisa yakadaro asi ini ndakaiisa mukati apo murume wangu aishanda .
Hatina zvinovuza, kudhonza pasi sprayer ndicho chinhu changu chitsva chandinofarira lol. Inotaridzika seyakadhura pamabhokisi makuru ezvitoro, yakapa kicheni yedu kutaridzika kwemazuva ano uye kwakanaka zvekuti ndinonakidzwa nekupedza nguva mukicheni lol. Uchanyatso kurudzira !!
Uku ndiko kusimuka kwechina kwepamusoro, dhonza pasi pombi yemukicheni yandakamisa.
Iyi ndiyo yakanakisa.
Iyo ine refu yekubatana. Uye simbi inokurumidza kubatanidza nati.
Iyo yekudhonza kunze hose yakareba, iine simbi isina simbi yakarukwa. Uyezve ine bhatani rekumbomira vamwe vanga vasina. Iyo zvakare ine yakanyanya kukwirira kuyerera chiyero.